သမ္မာကျမ်းစာ Software | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 23/05/2013
ဒီကျမ်းစာ Software လေးကို မိတ်ဆွေများက အွန်လိုင်းမှာ တောင်းနေကြတာ ကြာပါပြီ။ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် မေးနေကြပေမဲ့ ဒီ Software ကို တင်ဘို့ အချိန်မရတာကြောင့် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာပြည် ကွန်နရှင် အနေအထားကြောင့် တင်ဘို့ဆိုတာ မစဉ်းစားရဲအောင် ဖြစ်ရ ပါတယ်။ အခုတော့ မေးလွန်းမက မေးလာတာ ကြောင့် အခုလို အချိန်ယူပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ Software လေးမှာ ဘာသာပေါင်းစုံ ပါဝင်ပါတယ်။ မြန်မာလို (၂) မျိုး ယုဒသန် ဗားရှင်နဲ့၊ ခေတ်သုံး (MCL) ဆိုပြီး (၂)မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ ခေတ်သုံး မြန်မာ ကျမ်းစာကတော့ ဒီအထဲမှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်း တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး ယုဒသန် ဗားရှင်းကတော့ ဓမ္မသစ်၊ ဓမ္မဟောင်း နှစ်မျိုးစလုံး ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကချင်၊ ဟားခါး၊ ဖလမ်း၊ ဇိုတုန်၊ စီယင်း၊ စကောကရင်၊ Lhao Vo (ကချင်)၊ လူမျိုးတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ English ကျမ်းစာအုပ်အနေနဲ့ကတော့ World English Bible (WEB) ဗားရှင်း လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီ Software ကလေးကို မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ တင်တဲ့အခါ အခြား Java (Java Runtime Environment) လည်း လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ စက်ထဲမှာ ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ မလိုအပ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ မရှိသေးဘူဆိုရင်တော့ (ဒီနေရာမှာ) သွား ဒေါင်းလိုက်ပါ။ ဒီကျမ်းစာ Software ဟာ သူရဲ့ စာလုံး Font က ပိတောက် (Padauk) ဖောင့်ကို သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီတစ်မျိုးဘဲ ရှိတဲ့သူတွေ က ဒီဖောင့်ကိုလည်း ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ ပြီတော့ အင်စတော လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ပိတောက်ဖောင့်နဲ့ ကီးဘုတ် မန်နေဂျာကိုလည်း တစ် ခါတည်း တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး အသုံးပြုကြပါ။
ဒီကျမ်းစာ ဆော့ဝဲကို သုံးရင် ဘယ် browser အသုံးပြုပြု ရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် နောက်ဆုံးထွက် Mozilla Firefox ကို အသုံးပြု ပါ။ အောက်မှာ အင်စတော လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။ ပုံကို ကြည့်ပြီး လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ အဆင်မပြေရင် ကျွန်တော့်ထံ အီးမေလ်းပို့ပြီး မေးနိုင်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမယ့် လင့်ကတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Box. com မှာ တင်ထားတဲ့ ဒီဆော့ဝဲကို ဒီနေရာမှာ Download (ဒေါင်းလုပ်) ယူပါ။
MMBibleInstaller.exe ကို install ပြုလုပ်ခြင်း
ယခု BOX.COM မှာ တင်ထားတာကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါ။ 80 MB ကျော်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုက်ကြီးတဲ့ အတွက် ပြည်ပမှာ ရှိနေတဲ့သူ တွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ မြန်မာပြည်က လူတွေကတော့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့ အချိန်ပေးရ ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာ ကျမ်းစာဆော့ဝဲကို ဒေါင်းလုပ် ဆွဲပြီး တဲ့အခါ MyanmarBible.rar ဆိုတဲ့ ဖိုင် တစ်ခုကို မိမိကွန်ပြူတာမှာ ဝင်လာမှာ ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ rar ဖိုင်ကို Exract လုပ်ပါ။ အဲဒီအထဲမှာ အောက်ပါအတိုင်း Files နဲ့ Folder တွေကို လက်ခံရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Extract လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ MMBibleInstaller ကို ရှာဖွေပြီး install လုပ်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း စတင်မြင်ရပါလိမ့်မည်။
အထက်ပါအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မည်။ အနီရောင် ပြထားသလို I Agree ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ နောက်တဖန် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက် မြင်ရပါလိမ့်မည်။
မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘာသာများကို ရွေးချယ်ပါ။ အများစုကတော့ မြန်မာကျမ်းစာကိုသာ လိုကြသည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျမ်းစာ နှစ်မျိုးဖြစ်သော ယုဒသန် ဘာသာပြန်ကျမ်း (Judson) နှင့် မြန်မာခေတ်သုံး (MCL) ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ခေတ်သုံး မြန်မာ (MCL) မှာ ဓမ္မသစ်ကျမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း မရနိုင်ပါ။ မိမိ ရွေးချယ်လိုသော ဘာသာများကို ရွေးချယ်ပြီးပါက Next ကို ဆက်လက် ကလစ် လိုက်ပါ။
အင်စတော ပြုလုပ်ချိန်တွင် သိုလှောင် သိမ်းဆည်းမည့် နေရာကို ပြပါလိမ့်မည်။ နေရာပြောင်းရွေ့သိမ်းဆည်းလိုပါက မိမိနှစ်သက်ရာ နေရာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ဘာမျှ ပြုလုပ်စရာမလိုပါ။ အထက်ပါအတိုင်း အနီရောင်ပြထားသည့် Install ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ထိုအခါ အောက်ပါအတိုင်း မေးခွန်းမေးမြန်သည့် box တစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မည်။ တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ အောက်မှာတော့ မြန်မာလို Typing ရိုက်မှာလားလို့ မေးနေပါတယ်။ မိမိသိလိုတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်တွေ ရှာမယ်ဆိုဘို့အတွက် Yes လို့ ပြောလိုက်ပါဗျာ။ ဒါဆိုရင် Keyman Myanmar Keyboard ကို install လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကီးဘုတ်ကို တင်ပေးပေးမထားပါဘူး။ ဒါကြောင့် No ကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်က ကျမ်းစာ သက်သက်ကိုသာ ပေးချင်တာကြောင့် ကီးဘုတ်ကို ထည့်ပေးမထားပါဘူး။ မိတ်ဆွေ လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အင်တာနက်မှာ ကိုယ်ဘာသာ ရှာပြီး ဒေါင်းလုပ် ယူလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ (အောက်မှာ လင့်ပေးထားပါတယ်။)
ဒါဆိုရင် အောက်မှာ install လုပ်နေပါပြီ။ ကျမ်းစာအုပ်တွေ အားလုံးကို သင့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ ကော်ပီလုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ အချိန်အနည်းငယ်ယူမှာမို့ စိတ်ရှည်စွာနဲ့ စောင့်လိုက်ပါ။ က်ာပီကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ ကျမ်းစာအုပ်တွေ ရောက်သွားပါပြီ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း close ကို နှိပ်ပြီး အဆုံးသတ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် ကျမ်းစာ အင်စတောလုပ်ထားတာ ပြီးသွားပါပြီ။ သင့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာကနေ Start Menu ကို All Programs ကနေဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ မြန်မာ ကျမ်းစာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Myanmar Bibles ကို ဖြစ်စေ Myanmar Bibles Firefox ကို နှိပ်ပြီး ဆက်လက်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ Firefox browser ပွင့်လာပြီး အခုလိုမြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက် အနီရောင်ပြထားတဲ့ နေရာကနေ မိမိဖွင့်ချင်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ကျမ်းစာကို Click ပြီ ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ မြန်မာကျမ်းစာဆော့ဝဲတစ်ခုလုံး ရောက်ရှိလာပါပြီ။
ဘာသာစကား ရွေးချယ်ပြီးနောက် မိမိဖတ်လိုသည့် ကျမ်းကို ဆက်လက်ရွေးချယ်ပါ။
၂။ အခန်းကြီး ရွေးဘို့
၃။ အခန်းငယ် ရွေးဘို့
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ခပတ်တော်များဖြင့် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ ကြွယ်ဝစွာ ခံစားရပါစေသော်။
အထက်ပါတို့ကို အင်စတောလုပ်ပြီး အဆင်မပြေရင် Java ဆော့ဝဲ မရှိလို့လား၊ (သို့) မြန်မာ ပိတောက်ဖောင့် မရှိလို့လား စသည်ဖြင့် တွေးစရာ များ ရှိလာပါတယ်။ အဲဒီ အခါ လိုအပ်သောအရာများကို အောက်ပါနေရာများတွင် ဒေါင်းလုပ် ယူနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာဖောင့်နဲ့ ကီးဘုတ် ကို ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး အင်စတော လုပ်နိုင်ပါသည်။ မြန်မာလို ဖတ်ရုံသာ ဖတ်ပြီး မြန်မာယူနီကုတ်ကို ရိုက်ဘို့ မရှိဘူးဆိုရင် ဖောင့်တစ်ခုတည်းကိုသာ အင်စတော လုပ်ပါ။
ဤဆော့ဝဲသည် Java ဖြင့် အလုပ်လုပ်သောကြောင့် Java Runtime Environment ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုပါက ဒီနေရာ မှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
မှတ်ချက် – ကျွန်တော်အတွက် အခုလို ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ ဆောဝဲများအကြောင်း တစ်ခါမျှ မရေးဘူးပါဘူး။ ရေးလည်း မရေးတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တင်ပြပုံ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ထံမှာ လှမ်းပြီး အီးမေလ်းနဲ့ မေးမြန်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တတ်နိုင် သလောက်တော့ ကြိုးစားပေးပါမယ်။ ပြန်လည်ရေးပေးပါမယ်။ ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကတော့ ဒီ Software ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရတာ ခက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ထံလာခဲ့ပါ။ ကျွန်တော် စီဒီနဲ့ကူးပြီး လက်ဆောင်ပေးပါမယ်။
by Rev. ဦးမင်းလွင်
← အောင်မြင်ခြင်း နှင့် ရှုံးနိမ့်ခြင်း
ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်း →
5 comments on “သမ္မာကျမ်းစာ Software”